आफ्नै संसार: संवाद
केशव स्थापित भन्छन्, ज्ञानेन्द्रले झन्डै गोली हानेका -स्थापित
(काठमाडौं महानगर पालिकाका चर्चित तथा लोकप्रिय पूर्व मेयर केशव स्थापितको अन्तरवार्ता नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरेर पोष्ट गरेको छु । नेपालमा सकारात्मक चिन्तन राख्ने र भविश्यप्रति नागरिकलाई आशा जगाउने सक्ने क्षमता स्थापित राख्छन् । उनको काठमाडौं उपत्यका र नेपाललाई विकासित बनाउने आफ्नै योजना छ । स्थापित मेयर भएकै बेला काठमाडौंको सडक फराकिलो बनाउने अभियान शुरु भएको थियो । ‘मेरो पौरख, मेरो गौरव, मेरो काठमाडा’ैं नारासहित उनी मेयर भएका बेला काठमाडौंलाई विकसित शहर बनाउनमा लागेका थिए । धेरैका लागि उपयोगी ठानेर मेरो ब्लगमा यसलाई साभार गरेको छु ।)
काठमाडौ । मान्छेले तपाईंका कुरा बढो चाख मानेर सुन्छन् तर सिरियस्ली लिन्छन्जस्तो लाग्छ कि हावा भन्छन् ?
देश विकासको पूरै योजना मसँग थियो, मैले फटाफट सुनाएँ । प्रभावित भएर राजाले भने, ‘लेट्स वर्क टुगेदर, गिभ मि योर मोबाइल नम्बर ।’ मोबाइल नम्बर साटासाट भयो, बडो गजबको कुरा भयो ।
अन्तिममा राजाले राजतन्त्रको भविष्य के छ भनेर सोधेका थिए, मैले त भविष्य छैन, सकुन्जेल मिलेर काम गरौँ भनिदिएँ । राजाले ‘किन’ भनेर सोधे, मैले वीरेन्द्रको वंश विनाश हुनुमा दोष कसको छ थाहा छैन, तर मान्छेहरूले सरकारलाईर् नै भन्छन्, भनिदिएँ । मेरी आमाले यी राजाको मुख देख्नुसाथ टिभी बन्द गर्नुहुन्छ । पारसको ताल त्यस्तो छ । अनि कसरी राजतन्त्र टिक्छ भनिदिनूँ ।
त्यो विवेक शाह थियो । उसले पनि थर्काउन खोज्दै थियो । मैले भनिदिएँ, ‘अस्ति चौरमा बसेर सँगै दारु खाने, अहिले दरबारभित्र बसेर मलाई थर्काउने ?’ ऊ कराउँदै थियो, म हिँडेँ ।
कमल थापा सञ्चारमन्त्री थिए, म एफएमको लाइसेन्स लिन गएको थिएँ । ओ केशवजी ! सहयोग गर्नुपर्‍यो भने उनले । मैले भनेँ, ‘मलाई मेयर बनाउनुस्, राजालाई ढाँट्न काम लाग्छ । म ड्याङडुङ पारिहाल्छु । धुमधाम काम भएको छ भनेर राजा दंग परिहाल्छन्, अनि तपाईं गरिखानूस् ।’ उनले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई फोन गरे, अर्को दिन थापाकहाँ जानबित्तिकै लौ काम गर्ने मान्छेसँग अँगालो मार्नुपर्‍यो भनेर अँगालो मारे । अनि मलाई मेयर बनाए, काम सुरु गरेँ । राजालाई भेट्नै परेन ।
कुरा के हो भने दोस्रोपटक वार्ता टोली आयो, सबैतिर डेरा खोजेछन्, कहीँ भेटेनछन् । पहिले एमालेमा भएका एकजना मित्रले तपाईंकै घरमा नेताहरूलाई बसाउनुपर्‍यो भने, मैले हुन्छ भनेँ । १०/१५ जना गार्डसहित बादल आए । बेलुका सँगै थियौँ, मैले भनेँ, ‘मेरो त दारु खाने वेला भयो, तपाईंहरू खानुहुन्छ ?’ उनीहरूले खान त खाइन्छ तर आज कतै बोलाउन सक्छन्, नखाउ“m भने । मैले खाएर गफ दिन थालेँ ।
आर्मीको खास मान्छेले मलाई दसैँको टीकाको दिन डाकेर भने, ‘ल आज मेरो हातको टीका भाइले लाउने, भाइको हातको मैले लगाउने ।’ टीका लगाइयो, दारु खान बसियो । खाँदै गएपछि त अचानक भन्छ, ‘माओवादीलाई एफएम किनिदिने ? हतियार मिलाइदिने ?’ दारु त भाग्यो । तैपनि भनिदिएँ, ‘माओवादीले दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्छन्, दीर्घकालसम्म यो लफडा कसले सहने ? फैसला छिटो हुनुपर्‍यो भन्ने मेरो मान्यता हो ।’
गरे नि । त्यो एकजना छ नि सेनाको बालाजु क्याम्पमा जुत्ताको तुनाले आत्महत्या गरेको । अँ… साधुराम देवकोटा, हो त्यसले मलाई ज्यान लिन खोज्याथ्यो ।
सोल्टी होटलमा कार्यक्रम थियो, कार्यक्रममा मोबाइल अफ थियो । पछि दारु पनि खाइयो । हिँड्ने वेलामा मोबाइल अन गरेको त साधुरामले फोन गरेर भन्छ, ‘ए साला, कुकुरको मुत खाएर बसेको ?’ अनि मैले भनेँ, ‘तँचाहिँ जनताको रगत खाएर बस्ने ?’ झन् कस्सिएर ‘बाहिर निस्की तलाईं ठोक्छु’ भन्छ । मैले भनेँ, ‘हेर भाइ, तँ पनि कम्युनिस्ट, म पनि कम्युनिस्ट, हतियारले हान्न पाइँदैन, फाइट खेल्ने भए खेलौँ ।’ अनि पुलिस-सुलिसलाई फोन गर्ने हैन है भन्छ । मैले भनेँ, ‘फोन नकाटी जाउ“m, पुलिसलाई फोन गर्ने चान्स नै भएन ।’
महाराजगन्ज भेट्ने कुरा भयो, फोनमा गाली गरागर । मेरो ड्राइभर कापिरहेको थियो, वडाध्यक्षले त झन्डै पाइन्टमै पिसाब फेरेछ । महाराजगन्ज पुगेपछि चाबहिल जाउ“m भन्छ । मैले भनेँ, ‘ठोक्नचाहिँ पाइँदैन, जहाँ भने पनि जान्छु ।’ मेरो गाडीका अगाडि-पछाडि उनीहरूका मोटरसाइकल । गालीबेइज्जती त कति कति Û त्योबीचमा त्यसकोे अर्को मोबाइलमा फोन आयो, उता कुरा गरेर मलाई भन्छ, ‘तँलाई आज नठोक्नु भन्ने खबर आएकोले बचिस् ।’ म त झसंग भएँ । भनेँ, ‘ए बेइमान, तँैले मार्न पो खोज्याथिस्, फाइट मात्र खेल्ने भनेको होइन ?’ झुक्याएर झन्डै मारेछ ।
सुकुम्बासीको इस्यु लिएर हिसिलालाई भेट्न गा’थेँ । सुकुम्बासीका घरटहरा उठाउँछौँ भनेर थर्काउने, यो शैली त अमानवीय भयो भनेर मैले भनेँ । मैले बाटो विस्तारदेखि सुकुम्बासीका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर यही डायरीमा टिपेको थिएँ, हिसिलालाई देखाएँ, हिसिला त डायरी बोकेर कुद्दै गइन् । एकैछिनमा बाबुरामलाई लिएर आइन् । केशवले त चमत्कार गरेको छ भनेर बाबुरामलाई भनिन् । के चमत्कार भनेर उनले सोधे । मैले डायरी पल्टाएर योजना देखाएँ । उनीहरूले मलाई बेलुका आउनु अनि कुरा गरौँला भने ।
करिब एक महिनापछि हावाबाट बिजुली निकाल्ने ‘विन्ड मिल’को कुरा लगेर गा’थेँ फेरि बेलुका आउनुस् भने । म बेलुका गएँ । जानासाथ बाबुरामले भने, ‘कांग्रेसले यो देश बनाउँदैन, एमालेले बनाउँदैन, राप्रपाले बनाउँदैन, मलाई तपाईंजस्तै मान्छे चाहियो, तपाईंको फोटोकपी एकजना दिनुस् ।’ दुई/तीनपटक फोटोकपी फोटोकपी भन्छन् । मैले भनेँ, ‘तपाईंले मुख फोरेर भन्न नसकेको, फोटोकपी होइन मै चाहिएको हो तपाईंलाई ?’ बाबुराम दंग परेर मलाई सोधे, ‘तपाईं मान्नुहुन्छ ?’ मैले तत्कालै हात मिलाएँ ।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल मन्त्रीकहाँ जानुस् भने । हृदयश त्रिपाठीले ‘मान्छे त मलाई तपाईंजस्तै चाहिने हो तर अर्कै मान्छेको नाम सिफारिस भइसक्यो’ भन्छन् । सचिवकहाँ गएको ‘तपाईं आईए पासले कहाँ हुन्छ’ भन्छन् । म फेरि घुमेर प्रधानमन्त्रीकहाँ गएँ । यस्तो-यस्तो भयो भनेर मैले सबै रिपोर्टिङ गरेँ । एक दिन बिहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, कताकता लब्धप्रतिष्ठित पनि राख्ने व्यवस्था रहेछ, त्यही व्यवस्थामा टेकेर लब्धप्रतिष्ठितका रूपमा मलाई नियुक्ति दिइयो ।
भयानक सम्झना छ, मलाई । एकदिन बोलाउनुभो, अगाडि राखेर ह्याँ गरेर यता फर्किनुहुन्छ, ह्वाँ गरेर उता र्फकनुहुन्छ, कुनै ताल हो यो भन्नुहुन्छ, अनि यसरी बन्छ देश भन्नुहुन्छ । घरि टाउको यता बटार्नुहुन्छ, घरी उता बटार्नुहुन्छ । मैले कुरै बुझिनँ । धेरैबेरसम्म ह्याँ र ह्वाँ गरेर थर्काउनुभो । कुरा खोल्नुभएन । म उहाँको सामुन्ने कहिल्यै चुरोट नखाने मान्छे, चुरोट सल्काएर तानिदिएँ । त्यसपछि उहाँ झन् उपि|mनुभो । फेरि भन्नुहुन्छ, ‘यसरी देश बन्छ ?’ अनि मलाई हाँसो लाग्यो । ‘ए नेतृत्वको अगाडि हाँस्ने ?’ भनेर फेरि थर्काउनुहुन्छ । ‘के थर्काउनुहुन्छ, भन्नुस् न कुरा ?’ मैले भनेपछि उहाँले एउटा बिल निकाल्दै भन्न थाल्नुभयो, ‘नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएर १७ हजारको रक्सी खाने, यही हो इज्जत ? यसरी बन्छ पार्टी, यसरी बन्छ देश ?’
अहिले साउदी अरबमा राजदूत हुनुहुन्छ नि, उदयराज पाण्डे । उहाँको नयाँ बजारमा घर, बाउसँग खट्पट् । अहिले त मिल्छ, त्यतिवेला राजनीति नमिल्ने । घरको भाडा बाउले महिना मर्नु चार/पाँच दिनअघि नै उठाएर लग्ने, छोरालाई कहिल्यै नदिने । अति भएपछि उदयजीले डेरामा बस्ने सबैलाई एक दिन भन्नुभएछ, ‘आज मलाई भाडा नदिने हो भने राम्रो हुन्नँ ।’ उहाँले अचानक १७ हजार पाँच सय उठाउनुभएछ । ‘भोलि बाउ पैसा माग्न आउँछन्, आज यो पैसा कसरी मास्ने ?’ भन्दै उहाँ आउनुभयो । मैले भनेँ, ‘एकै रातमा त्यत्रो पैसा सक्न त दारु खानुपर्छ, त्यो पनि ब्लू लेबल ।’ साढे आठ हजारमा ब्लू लेबल किनेर हामी आँगन रेस्टुरेन्टमा गयौँ । मजाले विभिन्न स्न्याक्ससहित खायौँ । बाउलाई देखाइदिने भनेर रक्सीको बिल पनि रेस्टुरेन्टकै बिलमा लेख्न लगायौँ । साढे १७ हजार बिल भयो, पाँच सय रुपैयाँ टिप्स दिएर हिँड्यौँ । खाने टोलीमा एकजना माधव नेपालको खुफिया रहेछ, बिल लगेर दिएछ । माधवजीले कालो डायरीमा बिल राख्नुभएको रहेछ, पाँच वर्षपछि निकालेर मलाई थर्काउनुभयो ।
मैले घटना सबै बताएँ । मैले भनेँ, ‘कमरेड तपाईंको अगाडि झुट बोल्दिनँ । सानोमा हामीले चिया खाएनौँ, यही खाएर हुर्केको हो, अहिले पनि कहिलेकाहीँ खाइन्छ ।’ उहाँले कति खानुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो । मैले पञ्जा देखाएर ‘पाँच पेग’ भनेँ । तत्कालै उहाँले भन्नुभो, ‘घटाउनुस्, आजदेखि तीन पेग खानूस् ।’ मैले भनेँ, ‘कमरेडले निर्देशन दिनुभयो, म आजदेखि तीन पेगभन्दा बढी खान्नँ ।’ उहाँले त्यहीबाट भीम रावललाई फोन लगाएर थर्काउन थाल्नुभयो, ‘ए भीमजी, यस्तो इमानदार कार्यकर्ताको विषयमा पोल लगाउने, तीन पेग खाउभन्दा तीन पेग मात्रै खाने यस्तो आज्ञाकारी कार्यकर्ता को हुन्छ ? यस्ता कुरा नलगाउनुहोला ।’ मलाई पनि हिँड्ने वेलामा भन्नुभो, ‘लिमिटभन्दा माथि नजानू है ।’ मैले ‘हवस् कमरेड’ भनेर अभिवादन गरेँ ।
म विदेश जाने हो, तपाईंको काम यही देशमा छ भनेर भनिदिएँ । उनी त जिम्मेवारी आउने भनेर मख्ख । अघिल्लो दिन मैले कोटको खल्तीबाट खाम निकालेर भनेँ, ‘पत्र तयार छ, भोलि दिन्छु ।’ उनी खुसी भए । कार्यवाहक दिन पत्र तयार भएछ भन्ने लाग्यो, उनलाई । उड्ने दिन विमानस्थलमा बिदाइ गर्न पनि आए, फूलमाला लगाएर मेरो अबिरजात्रा गरे, उपहार पनि दिए । म गेटभित्र छिरेर बाहिर उभिएका उनलाई पत्र दिएँ, उनी मख्ख परे । मभित्र छिरिसकेपछि खोल्दा त उनी बेहोसजस्तै भएछन् । सीधै एभरेस्ट होटल गएर दिउँसै दारु खाएछन् । दुःखको कुरा खल्तीमा पैसा रहेनछ, महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले उद्धार गरेर घर लगेछन् । कार्यवाहक त मैले आफ्नो पक्षका वडा अध्यक्ष श्याम चित्रकारलाई दिइसकेको थिएँ ।
ठ्याक्कै त्यस्तो होइन, पेज थ्री र नायकको बीचको फिल्म बनाउने योजना छ । अहिले ‘झ्याम्मै’ भन्ने कार्यक्रम टेलिभिजनबाट चलाउन मन लागेको छ, त्यसमा नेता, तस्कर, घुस्याहा कर्मचारी सबैलाई झ्याम्मै एक्स्पोज गर्ने योजना छ । अहिले पनि ‘यसो गरे कसो होला’ भन्ने कार्यक्रम त आइरहेकै छ ।
पत्रकार उमेश चौहानले गर्नुभएको कुराकानी
के सोच्दैछन् प्रचण्डलाई थप्पड हान्ने पदम कुवँर ?
(एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चड्कन दिएर चर्चामा आएका पदम कुवँरको विचारोत्तेजक अन्तरवार्ता हालै नेपालको चर्चित साप्ताहिक कान्तिपुर साप्ताहिकले छापेको थियो । सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा माओवादीमा सबै जना लागेर कुवँर परिवार करिब छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । उनै पूर्व माओवादी कार्यकर्ता पदम कुवँरको अन्तरवार्ता साभार गरेको छु । –आरडी)
गएको मंसिर १ गते नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि उनकै युवा कार्यकर्ता पदम कुँवरले थप्पड हाने। ठूलो सुरक्षा घेरामा रहने प्रचण्डमाथिको यो आक्रमण विश्वकै सञ्चारमाध्यमका लागि महत्वको समाचार बन्न पुग्यो।
लगत्तै बसेको उक्त पार्टीको बैठकले देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको उक्साहट र योजनामा गम्भीर षड्यन्त्र भएको निर्णय गरेपछि उक्त थप्पडको महत्व थप वृद्धि भयो। थप्पड प्रकरणलगत्तै माओवादी कार्यकर्ताबाट मरणासन्न हुने गरी पिटाइ खाएका पदम तीन साता लामो हिरासतमा बसे। हिरासतबाट छुटेपछि पदम अहिले गुमनाम जिन्दगी बिताइरहेका छन्।
थप्पडलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उक्त दलको कुरा बाहिर आए पनि थप्पड हान्नुपर्ने कारण के पर्‍यो भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यमहरू मौन रहे। त्यति मात्र होइन, पदम अहिले कहाँ के गदैर् छन् भन्ने कुरा पनि बाहिर आएका छैनन्।
कतिपयले माओवादी सुरक्षा घेरामा रहेको वा सुरक्षाका कारण भूमिगत अवस्थामा रहेका बताए पनि साप्ताहिकले उनलाई खोजेरै छाड्यो अनि उनको विगत, थप्पड हान्नुपहिलेको मनोदशा एवं थप्पड हानिसकेपछिको स्थिति तथा भावी योजनाहरूका सम्बन्धमा जान्ने प्रयास गर्‍यो । उक्त थप्पड प्रकरणसँग जोडिएको त्यस्ता अनगिन्ती रहस्य पदम कुवँरकै शब्दमा ।
आखिर पदम कहाँ के गर्दैछन्, यसको खोजबिन गर्दै साप्ताहिक पदम कुँवरको बासस्थानमा पुगेको थियो। थप्पड काण्डपछि माओवादी कायर् कर्ताको कुटाइबाट भाँचिएको नाकको उपचारका क्रममा रहेका पदम साप्ताहिक प्रतिनिधि उनको डेरामा पुग्दा प्रचण्डकै बारेमा समाचार पढिरहेका रहेछन्। दिदी भिनाजुको डेरामा बसिरहेका पदमले हामीलाई कालो चिया बनाएर ख्वाए पनि खुलेर कुरा गर्न अप्ठयारो माने।
यद्यपि वास्तविक स्थिति प्रकट गर्न आग्रह गर्दा पदमले भने, 'म माओवादी सुरक्षा घेरामा त छैन, तर आफ्नो सुरक्षाका कारण चिन्तित छु। कतिपय नखुलेका नम्बरबाट अनौठा व्यक्तिले बधाइ पनि दिइरहेका छन् र धम्की शैलीका फोन आइरहेका छन्। यद्यपि बधाई दिए भनेर खुसी पनि भएको छैन भने धम्कीबाट डराएको पनि छैन।'
अन्तरमुखी स्वभावका पदमबाट कुरा निकाल्न पहिलो दिन निकै गाह्रो भयो। करिब १ घन्टाको बसाइमा उनी थोरै मात्र खुले। व्यक्तिगतभन्दा पनि जनयुद्ध कालमा आफूले विद्यालयमा संस्कृत विषय हटाउन गरेको संघर्ष, वाईसीएलका रूपमा जिल्लामा काम गर्दा हात भाँचिएका कुरा मात्र गरे। उनको व्यवहारले हामी कुनै गलत नियतले आएका हौं कि भन्ने सोचिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो। उनको अप्ठयारो बुझेपछि भो लिपल्ट भेट्ने वाचा गरियो। त्यसपछिका दुई दिन भने पदम राम्रैसँग खुले। उनले अश्विनी कोइरालासँग थप्पड काण्डका आन्तरिक कुरा मात्र गरेनन्, मनका सबै पीडा एवं आक्रोश बिनासंकोच व्यक्त गरे।
प्रचण्डमाथि नै हात उठाउँछु वा यसै गर्छु भन्ने थिएन। दुई वर्षदेखि काठमाडौंमा भौंतारिरहेको थिएँ। एक महिनाअघिदेखि जब साथीभाइको कुरा सुन्थें, नेताहरूको व्यवहार हेर्थें, त्यसै-त्यसै खटपट भएर आउँथ्यो। हामीजस्ता गरिब जनताका नेता २० करोड पर्ने घरमा बस्छन् भन्ने सुनेपछि त्यो घर हेर्न गएँ। त्यहाँको तामझाम देखेपछि चाहिँ प्रचण्डलाई नै हान्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।
थप्पड हिर्काएपछि मेरो परिवारसँग प्रचण्ड र माओवादीले माफी मागेको भए म उहाँलाई धन्यवाद भन्थें र कमाउन कतार जान्थें। कुनै गुनासो रहने थिएन, कुरा सकिन्थ्यो। आखिर हामी पहिलेदेखि नै अर्काको देशमा सेवा गर्न जन्मिएका रहेछौं। म थप एउटा मजदुर हुन्थें। मेरो सामान्य आक्रोशलाई बङ्ग्याएर अरूले उक्साएको भनेर जसरी कुरा मोड्ने काम भयो, मलाई लाग्यो, नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ। हामी जस्ता सीधा मान्छे, राजनीतिमा लागेर केही हुँदो रहेनछ भन्ने बुझें, अब समाजसेवा गर्छु। - अश्विनी कोइराला